VIDEO: Wiilasha Lionel Messi oo daawanaya
Wiilasha Lionel Messi ayaa ku riyaaqay daawashada aabahood oo laad xor ah oo cajiib ah sameeyay kulankii shalay, iyadoo xafladaha si weyn looga wadaagay baraha bulshada.
AKHRI warbixintii ugu dambeysay ee xaaladda dhaawaca
Ma aheyn xilli ciyaareed fiican Barcelona ama Messi ilaa iyo inta 33 jirkaan ay u badan tahay inuu dhameystiro qandaraaskiisa ka hor inta uusan xagaaga si xor ah uga tagin.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, ciyaaryahanka lix jeer ku guuleystay Ballon d’Or ayaa ku soo laabtay qaab ciyaareedkiisii ​​fiicnaa wuxuuna labo jeer sameeyay kulankii Athletic Bilbao habeenkii Arbacada.
Habeenkii Sabtida, Messi wuxuu labo gool ka dhaliyay Granada. Goolkiisii ​​ugu horeeyay wuxuu ahaa darbo macaan oo ka timid rigoorada, waxaana ku xigay laad xor ah oo cajiib ah.
Laadga xorta ah ayaa farxad galiyay jamaahiirta Barcelona, ​​laakiin guriga Messi, wiilashiisa Matteo iyo Ciro ayaa ku riyaaqay goolka, taasna waxaa cadeeyay dabaal dagooda.
Mateo Messi wuxuu u dabaaldegayaa goolka Messi 🥰 pic.twitter.com/85JNulQVlr
– Reshad Rahman ✆ (@HagridFCB) Janaayo 9, 2021
Antoine Griezmann ayaa daah furay goolasha 12 daqiiqo ciyaarta. Intaa kadib Messi ayaa laba gool ku dhaliyay 7 daqiiqo gudahood markii kooxda Ronald Koeman ay hogaanka la wareegtay qaybtii hore ee ciyaarta.
Griezmann ayaa dhaliyay goolkiisii ​​labaad bartamihii qeybta labaad, taasoo ka dhigeysa in Catalans ay afar dhibcood ka hooseyso kooxda hogaanka heysa ee Atletico Madrid inkastoo kooxda Diego Simeone ay seddex kulan u harsan tahay.
The UN anticipates the deployment of international ceasefire
In Côte d’Ivoire, native chocolate for adolescents